Xaalada Isbitaalka Wayn Ee Magaalada Jigjiga Oo Laga Dayrinayo. | Awdalmedia.com
Magaalada Jigjiga ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay soo gaaray koox dhakhaatiir ah oo ka kooban ilaa iyo dhowr iyo toban dhakhtar, kuwaasoo daawayn iyo qaliino bilaash ah ka fulinaya magaaladaasi.
Dr Negaye oo ka mid ah dhakhaatiirta xagga qalliinka safka hore kaga jira dalka Itoobiya ayaa ka dardaar weriyey dawada oo isbitaalka gabaabsi ku ah, iyo shaqaalihii ka shaqayn jiray oo aan soo wada laaban.
Dhaqaatiirta soo gaadhay magaalada Jigjiga ayaa waxaa socdaalka ku wehliyey tiro intaas oo kale ah oo kalkaaliyeyaal ah, iyagoo ka kala socdeen seddex isbitaal oo ku yaalla Addis Ababa oo kala ah Duqur Ambasa Hospital, Police Hospital iyo Yakatit Hospital.
Sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa ku xeeldheer cilmi nafsiga, oo dadka ka daweeya xanuunnada ka dhasha welwelka iyo isla hadalka, iyagoo dadka ku dhiirri galiyeen inay isbitaalka yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah.
Isbitaalka Meles Zenawi Referral Hospital ayaa ah kan ugu weyn bariga Itoobiya, wuxuuna qayb ka yahay jaamacadda Jigjiga.